Apple inotipa matipi ekuvandudza hupenyu hwebhatiri reMac yedu | Ndinobva mac
Apple inotipa matipi ekuvandudza hupenyu hwebhatiri reMac yedu
Jordi Gimenez | | Mac makomputa
Ivo vakomana vanobva kuCupertino vanowedzera chikamu chakatarwa pawebhusaiti yavo kusimudzira kushanda nesimba nesimba redu reApple uye nekushandisa zvakanyanya mashandiro emidziyo yedu nemabhatiri ayo. Panyaya yeMac, vanotaura nezveMacBook mune zvese, asi iwo musoro wenyaya unoonekwa MacBook Mhepo uye MacBook Pro.
Iwo akateedzana eakareruka uye akanyatso kukosha matipi isu tinoziva uye tese pano tiri kuziva, asi Izvo zvakanaka kuti Apple inokumikidza chikamu cheayo webhusaiti hombe kutarisirwa kwemabhatiri yeMacs uye nezvimwe zvemuchina wacho zvigadzirwa.
1 Nyore uye anoshanda matipi
2 Gadzirisa marongero
Nyore uye anoshanda matipi
Chinhu chekutanga chavanotiudza ndechekuvandudza maMacs pese patinokwanisa Ichi ndicho chinhu chingaratidzika kunge chakakosha, asi kune vashandisi vasingavandudze michina yavo, nekudaro vachirasikirwa nekuvandudzwa kunopihwa neApple mushanduro nyowani, kunyanya mukuchengetedza nyaya. Mune ino kesi, zvakakoshawo kutaura kuti hazvidi kuti uvandudze nekukurumidza kana iyo vhezheni nyowani yatanga, tinogona kumirira vhiki kana tichitya kuti chimwe chinhu chichatadza uye pamusoro pezvose kupa vanogadzira nzvimbo kuti vave nemaapplication avo. uye zvishandiso zvakagadziridzwa kuti zvishande zvakanaka, asi zvakakosha kugadzirisa.
Neiyi Apple inoda kuti tishandise zvinhu sezvakakosha se iyo Economizer. Ichi ndicho chinhu chatinowana paMacs zvakananga muSystem Preferences> Energy Saver. Kubva pane izvi iwe unogona kugadzirisa paramende sezviri nyore seya bvisa iyo skrini mushure menguva yekusaita, isa discs kuti zororo pazvinogoneka kana kutodzima chidzitiro kana uchishandisa bhatiri. Iyo yekupedzisira inobvumira kudzikisa kupenya uku uchichaja bhatiri uye nekudaro tinoita kuti bhatiri igare kwenguva refu. Pakupedzisira iyo Simba Nap, iyo yatakambotaura nezvayo muNdiri paMac dzimwe nguva uye inotibvumidza kuenderera nguva nenguva tichitarisa maemail, makarenda kana iCloud inogadziridza apo komputa iri pazororo uye yakabatana nesimba (izvi zvinowanzoremara kubva kuKutangira).
Gadza kupenya kune yakaderera inogoneka nhanho Pasina izvi zvichititadzisa kuona nemazvo zvirimo, ndechimwe chinhu chavanotsanangudzawo kuti vawane hupenyu hwakareba hwebhatiri. Semuenzaniso ivo vanotaura nezverwendo rwendege umo marambi akaderera kwazvo uye nekudaro isu tinogona kusevha yakawanda yebhatiri nekungodzikisa kupenya kwechidzitiro.
Dzinga Wi-Fi Kana isu tisingade kuve nehukama, iri zvakare nzira yakanaka yekushandisa bhatiri kushandiswa uyezve kuwedzera bhatiri remidziyo. Kubvisa mbeva kana chero imwe nzira kana tisiri kuishandisa zvakakoshawo, sekuvhara mafomu atisingashandise kana kurasa chero SD kadhi kana tisiri kuishandisa.
Unganidza iyo MacBook kune simba uchiroja iyo iPhone kana chero chimwe chishandiso paMac kubva kuUSP port Izvo zvakakosha kuti vasapedze mabhatiri eMac.Saka zvakanakisa kubhadharisa michina apo Mac iri kubhadharisawo, zvikasadaro zviri nani kusiya muripo wezvese zvishandiso kune imwe nguva.
Sezvauri kuona, aya matipi akakosha atinopihwa neApple asi zvakakosha kuti iwe ugovagovana nemunhu wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Apple inotipa matipi ekuvandudza hupenyu hwebhatiri reMac yedu
Iyo TV App yeApple TV inogona kuonekwa mune dzimwe nyika dzeEurope
Iyo mhete nyowani yeApple Watch ingave iri "Kufunga"